Codsiga Wicitaanka WIC
Barnaamijka moobiilka ee kaqeybgaleyaasha WIC.
Sii ka qaybgalayaasha qalabka ay u baahan yihiin si ay ugu soo baxaan WIC.
Waxaanu la wadaagnaa liiskaaga cuntada iyo hantida kale si loo abuuro waayo-aragnimo user oo si buuxda loogu habeeyay hay'addaada iyadoon loo eegin xaaladdaada eWIC. WICShopper waa hanti gaar ah oo gacan ka geysaneysa kordhinta furfurnaanta iyo sii-haynta iyo hubinta in ka-qaybgalayaashaadu ay ka helaan waqtiga ugu badan ee barnaamijkooda WIC.
Raashinka, cuntooyinka caafimaadka leh si ay u caawiyaan hooyooyinka diyaariso cuntooyinka WIC.
Ka-qaybgalayaashu waxay daawan karaan casharradaada oo waxay la xiriiri karaan xafiiska WIC ee kuugu dhow ama goobtaada caawinaada isla markiiba.
Ka qaybqaatayaashu waxay ogaadaan waxa ay ka iibsan karaan faa'iidooyinka haray.
Qoysaska 60,000 waxay ka akhrisanayaan dib u soo celinta cuntada la qaboojiyay ee la soo saaray bishii Agoosto.
Liiska Raashinka Cuntada
Waxaanu qaadanaa liiska cuntadaada iyo naqshadeynta si aan si quruxsan u muujino barnaamijka.
Ganacsatada iyo Xafiisyada
Muuji goobaha bixiyeyaasha xaqa u leh iyo xafiisyada degaankaaga.
Soo qaado WICShopper dukaanka app
Dooro hay'addaada WIC
WICShopper waxay taageertaa 38 gobol iyo wakaalado WIC
Isdiiwaangal adiga oo isticmaalaya nambarka 16 lambar ee ku yaal kaarkaaga WIC EBT hortiisa.
Markaad ku qorto kaarkaaga, adiga hadda iyo mustaqbalka Faa'iidooyinka WIC ayaa si otomaatig ah ugu soo dejisan doona barnaamijka.
Waxyaabaha la socda shayada sida aad u dukaameysid si aad u xaqiijiso u-qalmitaanka WIC. Gobolada oo idil, app ayaa kuu sheegi doona haddii ay tahay WIC uqalanto. Haddii gargaarkaaga la soo dejiyey, barnaamijka ayaa kuu sheegi doona haddii sheyga uu uqalmayo ADIGA faa'iidooyinkaaga haray.
Sheygan ayaa xaq u leh faa'iidooyinkaaga!
Kani waa shey u qalma WIC, laakiin ma lihid waxtarka aad ku iibsanaysid.
Ma aha sheygan
Waan ka xunnahay, sheygan maaha mid WIC u qalma.
Ma rumaysan kartid dib-u-eegista ku-saleysan ee ku saabsan barnaamijka ka yimid kuwa ugu dhow ka qaybgalayaasha.
Waxaan ku faraxsanaan lahaa inaan kufaraxo sida ay u sahlan tahay si aad u hesho barnaamijka, sida aad adigu u dejisay adigu inaad sameyso isbeddelka iyo ugu muhiimsan, sida wanaagsan ee ay u heleen ka qaybgalayaasheena.
Wali ma rumaysan karno tirooyinka!
Jacaylka app this !! Aad waxtar u leh! Hadda waxaan ogahay wixii aan u heli lahaa gabadhayda. Intii aad ku badbaadin lahayd rasiidhada. Warqad la'aan !! Tani waa hab fiican. Mahadsanid!
~ Ka-qaybgalaha WIC
Jacaylka app! Dhamaan wax walba oo aad u sahlan Mahadsanid!
Waan jeclahay app tan. Way sahlan tahay in aad eegto waxtarkaaga halkan ka eeg adoo raadinaya risiidh si aad u aragto wixii aad ka tagtay. Waxay ka shaqeysaa cabsi!
App app! Waan jeclahay barnaamijkan si fudud u xusuusto faa'idooyinka aan ka tagay!
Natiijooyinkani waxay sii wadaan inay xaqiijiyaan WICShopper waa kan ugu fiican - waana runtii kaliya barnaamijka WIC ee wax ku oolka ah ee la heli karo kaqaybgalayaasha.
Aad ayaan u faraxsanahay in WIC uu leeyahay app this iyo waa bilaash! Waxaan ku hubin karaa dheelitirka ixtiraamka telefankayga iyadoon haysan maareynta miiska adeega macaamiisha.
Waad ku mahadsan tahay WIC si aad tan u sameyso. Sidoo kale waa inaad jeceshaa qaybta qashinka. Marwalba raadi waxyaabo cusub si aad u sameysid caafimaad wanaagsan ilmahayga iyo aniga.
Haysashada dhalida waxay qaadataa tamar! Laakiin app tan i caawisaa aniga tons !! Ma waydiisan kartaa app wanaagsan si uu uga caawiyo iibsashada xayawaankayga
Woqooyiga Dakota WIC
Bixiyaha Macluumaadka, Qareenka Caafimaadka, Hay'ad aan faa'iido doon ahayn
Wax yar oo aad u yar
Bixiyaha Macluumaadka, Hay'ad aan faa'iido doon ahayn
Degmada Columbia WIC
Bixiyaha Macluumaadka, Wakaaladda Gobolka
Golaha Qabaa'ilka Inter ee Arizona WIC
Kellogg ee Bilowga Caafimaadka
Bixiyaha Macluumaadka, Qareenka Caafimaadka
Ma doonaysaa inaad hay'addaada ku hesho WICShopper? Maadaama aan samayno oo aan rabno in aan qayb ka nahay?
JPMA waxay ku lug lahayd barnaamijka WIC ee ka badan sanadaha 12. Laga soo bilaabo caafimaadka iyo nafaqada ee rugta WIC ama qalabka mobile waxaanu ku dadaalnaa in aanu bixino xalal cusub oo horumarinaya ujeedooyinka dhammaan dhinacyada ay khuseyso ee barnaamijka WIC.